Amathiphu Kusuka ku-Semalt On Indlela Yokuhlunga Okuphumayo kwe-Darodar Kusuka Iwebhusayithi Yakho
Ukugijima iwebhusayithi kungaba mnandi kakhulu njengoba kukunikeza ithuba elihle kakhulu lokukhulisa ibhizinisi lakho le-intanethi. Ibuye ikunike ithuba lokudala amathuba amasha ensimini yebhizinisi lakho. Ngeshwa, abanye abagaxekile bazozama ukuchitha amabhizinisi akho e-intanethi ngaphandle kwesizathu. UMax Bell, umphathi we-8 (Semalt uMphathi Wezokuphumelela Kwemakhasimende, uchaza ukuthi laba basebenzi be-cybercriminals benza konke okusemandleni abo ukudala izithiyo kubasebenzisi bewebhu kanye nogaxekile abathumeli abahlukile. Baphakathi kwabakhohlisi be-intanethi abakha ukungaxhunyiwe ku-inthanethi, futhi uma ungafuni, bangabhubhisa zonke izinhlelo zakho. Uma uhlola i-akhawunti yakho ye-Google Analytics bese uqaphela ukuthi kuningi lokudluliselwa kumawebhusayithi angaziwa kuseva yakho, kungenzeka ukuthi ukudluliselwa kwe-darodar kuqondisa isayithi lakho futhi udinga ukuthatha izinyathelo ezisheshayo ukuvimba.
Ukunquma ithrafikhi yogaxekile
Ukuze ukwazi ukuvikela iwebhusayithi yakho lezi bots, kufanele uzibonise kuqala. I-traffics yamanga yizikhombisi ezikhohlisayo ezivela kusayithi lakho lesizinda bese uzama ukufihla amagama abasebenzisi bokuqala. Ukudluliselwa kudukisa, futhi uma uhluleka ukuwabona ngesikhathi, kungabangela ukulahlekelwa okukhulu. Ngemuva kokuziveza, ungabe usuqala ngamasu okubavimba. Ezinye zezindlela ezinhle zokuvimbela ukudluliswa kwe-darodar zifaka:
Ukusebenzisa izihlungi ze-Google Analytics
Dala izihlungi ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics ezokusiza ukuthi uthuthukise inani le-traffic yakho. Lokhu kuzokusiza ukuqeda ukuhanjiswa okungadingeki, futhi ushiywe lokho okudingayo. Uzothola amakhodi ahlukile oyowafaka ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics ngaleyo ndlela uvimbele abakwa-spammeri ukuthi bangafinyeleli iwebhusayithi yakho, futhi ungawabuyisela kusayithi labo. Izihlungi ze-Google analytics zinikeza izindlela eziningi zokuvimbela ukudluliswa kwezimoto ze-darodar, kodwa ukungalungi okuyinhloko kwalendlela ukuthi akukwazi ukusetshenziswa kumasayithi amaningi ngesikhathi esisodwa.
Vimba ikheli labo le-IP
Ukuvimbela ikheli le-IP lokudlulisa i-darodar kulula. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi abakwa-spammers banqatshelwe ukufinyelela kuwebhusayithi yakho eyenza kube nzima kubo ukuthumela okuchaziwe okungaziwa.
Gcina uhlu lokukhishwa
Qinisekisa ukuthi ulondoloze uhlu lwakho lokuxoshwa kwe-Google. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi ungaqala ukujabulela ukusebenza kwakho kuwebhusayithi ngokuthula. I-Google izokunikeza uhlu lwezinto ongazishiya futhi uvimbele ikheli le-IP. Indlela elula ukubeka i-plug-in kuwebhusayithi yakho ukuqinisekisa ukuthi iphephile futhi ivikelwe.
Ukutholakala kogaxekile okudluliselwa kuyo kungaba inselele enkulu ngokucubungula imisebenzi eminingi ye-e-commerce. Kufanele uqinisekise ukuthi iwebhusayithi yakho isebenza ngokushelelayo ukuze ukhiqize umkhiqizo wakho, kodwa lezi bots ngeke zikuvumele. Kubi nakakhulu uma ungaqapheli ukuthi ungabheka kanjani nokuthi yini okufanele uyenze ukuze uvimbele. Amathiphu ashiwo ngenhla azokusiza ugcine iwebhusayithi yakho ikhululekile kulabo abagaxekile, futhi ungawafake kalula ngokubavimbela ukuba bavakashele iwebhusayithi yakho yesizinda. Hlala ubukhali futhi ubukele!